‘कुनै कुनै देउता किचकिचे हुन्छन्’
सोमबार, ०९ मङि्सर २०७६
कृष्णराज बोहरा, चालक, काठमाडौँ–डडेलधुरा, ना ८ ख ७४५५
मेरो घर डडेलधुरा हो। गाडी लाइनमा लागेको आठ वर्ष भयो। पहिले ट्रक चलाउँथेँ। सहचालकका रूपमा काम सुरु गरेको हुँ। त्यसपछि गाडी र ट्रक चलाउन थालेको हुँ। एसएलसीसम्म पढेको छु। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण धेरै पढ्न सकिएन। सानैदेखि गाडी लाइनमा रुचि भएकाले यतातिरै काम गर्न पुगेँ। काठमाडौँबाट डडेलधुरा पुग्न २०–२२ घण्टा लाग्छ। जाम पर्‍यो भने त भन्नै सकिन्न।
अहिलेसम्म गाडीबाट कमाएको पैसाले मज्जाले पुगेको छ। महिनामा टिप लागेको बेला ३०–४० हजार रुपैयाँ कमाइ हुन्छ। यस कमाइबाट परिवार पाल्न पुगेको छ। कमाइबाट सन्तुष्ट छु। आफ्नो कामलाई एकदमै सम्मान गर्छु। शरीरले साथ दिएसम्म यही पेशामा लाग्ने सोच छ।
खाना खाने समय हुँदैन
हातमा स्टेरिङ आएपछि निकै व्यस्त भइन्छ। कहिलेकाहीँ त खाना खानेसमेत समय हँुदैन। गाडी कहाँ पुगेर रोकिन्छ, टुंगो हुँदैन। त्यस्तो बेला घरको खानाको एकदमै याद आउँछ। सधैँ होटलको खाना खाएर वाक्क भइसकेँ। ताजा खाना कहिल्यै खान पाइँदैन। बाटोमा जस्तो पायो, त्यस्तै खाना खानुपर्छ।
निद्रा आफैँ भाग्छ
पहिला–पहिला नाइट गाडी चलाउन एकदमै तनाव हुन्थ्यो। राति निद्रा लागेर हैरान हुन्थ्यो। निद्रा भगाउन अनेक उपाय गर्थें। अहिल बानी परिसक्यो। गाडी लिएर हिँडेपछि निद्रा आफैँ हराउँछ। निद्रा लागेको खण्डमा गाडीमा अर्को चालक हुन्छ। दुई जना चालक भएपछि मिलेर पालैपालो गरेर ड्राइभिङ गर्छौं।
हामी प्यासेन्जरलाई देउता ठान्छौँ। तर, कोही–कोही देउता चाहिँ लास्टै किचकिचे हुन्छन्। गाडी अलिक छिटो चलायो ‘बिस्तारै चला’ भन्छन्, बिस्तारै चलायो ‘कस्तो लोसे ड्राइभर’ भन्छन्। प्रायः ४० जना प्यासेन्जर बोकेर हिँडिन्छ। सबैका आ–आफ्ना डिमान्ड हुन्छन्। सबैको चित्त बुझाउन साह्रै गाह्रो। कोही गीत बजा भन्छन्, कोही नबजा भन्छन्। कसको भनाइ मान्नु, कसको नमान्नु ? आपत् पर्छ !
चालक भएको एउटै फाइदा भनेको धेरै ठाउँ घुम्न पाइन्छ। चालक भएपछि नेपालका धेरै ठाउँमा पुगिसकेँ। गाडी रिर्जभमा पर्छ। त्यसैले धेरै ठाउँ घुम्न पाइन्छ, हेर्न पाइन्छ। अब विदेश घुम्ने रहर छ।
बाटोको हालत देख्दा विरक्त लाग्छ। सानो बाटोमा गाडी पास गर्नै गाह्रो पर्छ। एक त हामीलाई बाटोको तनाव हुन्छ, त्यसमाथि सिकारु चालकले हैरान पार्छन्। भर्खरै सिकेकाहरू पनि ठूलो गाडी चलाउन तम्सिन्छन्। भर्खर सिकेका चालकले गर्दा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ। भर्खरै कार वा मोटरसाइकल चलाउन सिकेको सिकारुबाट पनि बच्नुपर्छ। उनीहरूको गल्ती भए पनि दोष ठूलो गाडीलाई आउँछ। त्यसैले जोगिएर चलाउनुपर्छ।